ShweMinThar: “ချစ်တယ်” လို့ပြောလိုက်တယ်
Posted by Alex Aung at 11:20 AM
Blog လေးက မဆိုးပါဘူး။ ကောင်းပါတယ်. ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ useful widget လေးတွေ ဆွဲထည့်သွားလိုက်ပေါ့. ဘယ်လို Tool လေးတွေရနိုင်လဲဆိုတာ တစ်ခြား Blogger တွေရဲ့ Site ကနေလေ့လာနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ Forum မှာ Admin ကြီးရေးထားတဲ့ Free essential tools for blogger blogs မှာလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကဗျာမျိုးလေးတွေရေးသားနိုင်တဲ့ Blogger မျိုးလေးတွေကို Forum ရဲ့ Poem Corner ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ…